Xiaomi Black Shark 2: Noocyada, qiimaha iyo bilaabida | Androidsis
Xiaomi Black Shark 2: Nooca casriga ah ee casriga ah
Xiaomi waxay nooga tagaysaa warar badan saacadahaan. Nooca Shiinaha ayaa horay u soo bandhigay Redmi 7 dhawaan, taas oo aan horey kuugu sheegnay warka oo dhan. Hadda, shirkaddu waxay soo bandhigaysaa taleefannadeeda casriga ah ee cusub, Xiaomi Black Shark 2. Toddobaadyadan waxaa soo baxay xogo badan oo ku saabsan qaabkan, oo soo bandhigistiisa lagu xanto waxay ahayd 18-kii Maarso, sidii ay aakhirkii u dhacday. Waxaan horay u ogaanay qaabkan.
Nooca Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee ku jira qaybtan taleefannada casriga ah. Iyada oo tan Black Shark 2, calaamaddu waxay ku qaadaysaa tallaabo dheeraad ah qaybtan. Taleefan leh awood weyn, xitaa in ka badan intii ka horreysay ee soo martay. Moodelkan ayaa la filayaa in ugu dambayntii si caalami ah loo bilaabo.
Maalmo ka hor, faahfaahin cusub oo ku saabsan qaabkan ayaa timid, taas oo horeyba u caddeysay inay noqonayso taleefan leh awood weyn, sida muujiyey marinkiisa AnTuTu. Soo bandhigidiisa, tani waa wax horeyba loo cadeeyay. Wax badan ayaa laga filayaa taleefankan casriga ah ee Xiaomi. Maxaa horumar ah ee sumaddu keenaysaa?
1 Tilmaamaha Xiaomi Black Shark 2
2 Xiaomi Black Shark 2: Awoodda qaabkeeda ugu nadiifsan
3 Qiimaha iyo bilowga
Tilmaamaha Xiaomi Black Shark 2
Naqshadaynta qaabdhismeedka noocyadan ayaa lagu ilaaliyay qaabka. Naqshad aad u khaas ah oo ciyaaraha ah, taas oo shaki la'aan ah astaamo qeexaysa noocyadan kala duwan ee Shiinaha. Ku saabsan faahfaahinta, tan madow Shark 2 waxay la timid horumarinno kala duwan. Processor ugu fiican ee suuqa ayaa loo isticmaalaa, marka lagu daro isagoo si weyn u kordhay RAM. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Screen: 6,39-inch AMOLED leh FullHD + xal (2.340 x 1.080 pixels) iyo 19,5: 9 saamiga
Gacaliye: Qualcomm Snpadragon 855
Kaydinta Gudaha: 128/256 GB
Cámara trasera: 12 MP oo leh fur f / 1.75 + 12 MP oo leh aperture f / 2.2 oo leh Flash Flash iyo 2x zoom optical
Kaameerada hore: 20 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Batariga: 4.000 Mah oo leh Lacag Deg Deg ah 4.0 oo ah 27W
Xuduudaha kala duwan: Dual nano SIM, WiFI 802.11 ac, Bluetooth 5.0, aptX iyo aptX HD, GPS laba jibbaar ah, USB Type-C
kuwa kale: Hadalka codka ah ee rikoodhka ah, shaashadda shaashadda shaashadda
Nidaamka hawlgalka: Qalab Android 9
Cabbirada: 163,61 x 75,01 x 8,77 mm
Peso: 205 garaam
Shaki la'aan, naqshadeynta waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee noocyadan kala duwan ee nooca Shiinaha ah. Sidaa darteed, Black Shark-kan 2 wuxuu hayaa naqshadda aan ku aragnay inta u dhexeysa illaa iyo hadda. Xaaladdan oo kale, waxaad ku sharadaysaa laba midab, ku dhammeeyey madow ama qalin. Si ay isticmaaleyaashu awoodi doonaan inay doortaan isku darka ay aadka u jecel yihiin.
Awooddu waa arrin kale oo muhiim u ah taleefanka. Gudaha waxaan ka helnaa Snapdragon 855, processor-ka ugu awoodda badan in aan maanta diyaar u nahay taleefannada Android. Xayawaan ku siinaya awood weyn markay timaado inaad awood u leedahay inaad ciyaarto wakhti kasta. Intaa waxaa dheer, calaamaddu waxay naga tagaysaa dhowr isku-dhafan oo RAM ah, oo midkoodna ilaa 12 GB. Sidaas darteed u shaqeynta saxda ah ee taleefanka ayaa ka badan inta la hubo.
Black Shark 2 ma haysano jeebka dhagaha, inkasta oo Xiaomi ay sameysay. Sababtoo ah shirkaddu waxay isticmaashaa a laba afleetiye taas oo lagu meeleeyay cidhifyada toosan ee qalabka. Waxaan sidoo kale leenahay wadar ahaan seddex mikrofoon oo diirada lagu saaray ciyaarta, labo ka mid ah si loo joojiyo buuqa asalka halka kan kalena uu qaato codka isticmaalaha. Maxaa u oggolaan doona khibrad ciyaareed oo wanaagsan markasta oo leh heer sare.
Dhinaca kale, taleefankani wuxuu awood u leeyahay inuu aqoonsado muuqaalada, dhaqdhaqaaqyada, hubka ama dharbaaxo, si markaa uu u gariiri karo iyada oo ku saleysan. Xiaomi wuxuu sharxayaa in tan loogu talagalay in lagu siiyo khibrad ciyaaraha 4D ee taleefanka. Marka Black Shark 2 wuxuu u gariiri doonaa si ka duwan taas oo ku xidhan hubka loo isticmaalo ciyaarta. Maxaa intaa ka badan, xuduudo xasaasi ah oo la beddeli karo ayaa lagu daray taleefanka. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalaha inuu tuujiyo looxyada qalabka si uu ugu fuliyo ficilada ciyaarta. Laga soo bilaabo toogashada, u ordaya kuwa kale oo badan. Waxay kuu ogolaaneysaa adeegsi fiican markasta.
Xiaomi Black Shark 2: Awoodda qaabkeeda ugu nadiifsan
Taleefanka aan ku kulanno nidaam qaboojiye dareere ah, kaas oo loogu magac daray Direct Touch Liquid Qaboojinta Nidaamka 3.0. Waa nidaam mas'uul ka ah inuu daboolo aagagga taleefanka ee kululeeya inta badan, iyo sidoo kale gacan ka geysashada yareynta heerkulka saaran Motherboard-ka isku midka ah. Intaa waxaa dheer, waxaan ku leenahay qaab waxqabadka ugu badan ee tan Shark Madow 2. Mahadsanidiin, xawaaraha processor-ka ayaa kordhay, oo u oggolaanaya inuu joogteeyo heerka FPS oo deggan markasta. Markii aan ku isticmaalno qaabkan qalabka, khadadka cagaaran ee dhabarkiisa ayaa iftiiminaya.
Intaa waxaa sii dheer, Xiaomi ayaa faallo ka bixisay taas waxaa jira dhowr qalab oo loogu talagalay taleefanka, taas oo noo oggolaaneysa inaan u bedelno qaab cajiib ah. Waxaan haynaa GamePad 3.0, oo ku dheggan labada dhinacba, oo siinaya taleefanka badhamada jirka. Waxay u oggolaan kartaa khibrad ciyaareed oo wanaagsan. Dhinaca kale, waxaan leenahay qaab martigelin, kaas oo noo oggolaanaya inaan ku xirno telefishanka. Waxa kale oo jira kiis qaboojin ah, oo mas'uul ka ah yareynta heerkulka taleefanka 10 darajo 10 ilbidhiqsi oo keliya. Waa maxay kaabis dheeri ah nidaamka qaboojinta taleefanka.
Tan Xiaomi Black Shark 2 waxaan heleynaa dareeraha faraha ee lagu dhajiyay shaashadda. Nooca Shiinaha ayaa mar kale sharad ku sameeya tan, ka dib markii uu haysto dhawaan lagu arkay Xiaomi Mi 9 sidoo kale. Batariga, waxaan leenahay 4.000 Mah Mah, oo waliba leh 27W lacag deg deg ah. Marka lagu daro processor-ka waa inuu na siiyaa ismaamul wanaagsan.
Xiaomi's Black Shark 2 hadda si rasmi ah ayaa loogu sii hayn karaa Shiinaha. Summaddu mar hore ayey diyaarisay oo si rasmi ah u soo bandhigiddeeda ayaa ka dhici doonta dalka 22-ka Maarso Waxba lagama soo hadal qaadin taleefanka caalamiga ah xilligan la joogo. In kasta oo toddobaadyo la sheegay in qaabkani noqon doono midka ugu dambaynta lagu soo bandhigi doono suuqyo cusub. Laakiin waxaan rajeyneynaa in xoogaa xaqiijin ah dhowaan.
Qiimaha, waxaan horey u haysanay qiimaha afarta nooc in laga bilaabo taleefanka Shiinaha. Dhammaantood waxaa lagu sii daayaa midabbada madow iyo qalinka. Qiimahoodu waa:
Moodalka leh 6/128 GB wuxuu ku kici doonaa 3.199 yuan (420 euro si loo beddelo)
Nooca leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 3.499 yuan, qiyaastii 460 euro si loo beddelo
Black Shark 2 oo leh 8/256 GB qiimahiisu yahay 3.799 yuan (qiyaastii 500 euro in la beddelo)
Moodhalka leh 12/256 GB wuxuu ku kici doonaa 4.199 yuan, ku dhowaad 550 euro si loo beddelo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Black Shark 2: Nooca casriga ah ee casriga ah
Redmi 7: Xiaomi noocyadeeda cusub ee soo gelitaanku waa rasmi
Sida loo demiyo (ama loo kiciyo) shaqada kaaliyaha akhriska shaashadda Google